ပိုလန်နှင့် Golden Visa အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
အကောင်းဆုံး ပိုလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့်ရှေ့နေများ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက်ပွဲစားပိုလန်ရှိ Residency အစီအစဉ်များသည်ဖောက်သည်များ၏ကာကွယ်မှုအတွက်တွဲဖက်လုပ်ဆောင်သည်။
ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်နေထိုင်ခြင်းသည်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များမှနေထိုင်ခြင်း၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်မှနေထိုင်ခြင်း၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ဒုတိယနေထိုင်ခြင်း၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နှစ်ဆနေထိုင်ခြင်း၊ ပိုလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ယာယီနေထိုင်ခွင့်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နေထိုင်မှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပိုလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပိုလန်ရှိစီးပွားရေးနိုင်ငံသားအစီအစဉ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသား၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိသံတမန်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုလန်နိုင်ငံ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာ၊ ပိုလန်နိုင်ငံမှရွှေဗီဇာ၊ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ၊ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိဒုတိယမြောက်ဗီဇာ၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိဒုတိယမြောက်ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ၊ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာ၊ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာနိုင်ငံသား၊ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်၊ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ
နောက်ထပ်အထောက်အပံ့ဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency အားလုံးအတွက်“ 1 stop solutions” ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - EUR 100,000
ပိုလန်သည်ဥရောပအနောက်မြောက်ပိုင်းသစ်တောများနှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏လမ်းကြောင်းများနှင့် Eurasian ဆင်ခြေဖုံး၏ကျယ်ပြန့်သောလယ်ကွင်းများနှင့်ဆက်သွယ်ထားသောပထဝီဝင်လမ်းဆုံတွင်တည်ရှိသည်။ လက်ရှိတွင်နိုင်ငံခုနစ်နိုင်ငံမှကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ထားသောပိုလန်သည်သမိုင်းတစ်လျှောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံများ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ရေရှည်ကာလတစ်လျှောက်လုံးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သည်။ အလယ်ခေတ်အစောပိုင်းကာလများတွင်ပိုလန်၏နယ်နမိတ်များနှင့်မြူနီစီပယ်များသည်ဂျာမန်များနှင့်ဘောလ်စ်မှမွန်ဂိုများအထိတိုးတက်သောကျူးကျော်သူများရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသည်။ ၁၅၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်းပိုလန်သည်ဥရောပ၌အကြီးမားဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်မ၏အထင်ကြီးလောက်ဖွယ်ရာနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်ရာစုနှစ်နှစ်ခုကျော်ကြာပြီးနောက်ပိုလန်၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (၁၇၇၂-၁၉၁၈) တွင်သူသည်ပျောက်ကွယ်ကာရုရှား၊ ပရက်ရှားနှင့်သြစတြီးယားတို့၏တိုက်ပွဲနယ်မြေများကိုခွဲဝေချပေးခဲ့သည်။
အမှန်စင်စစ်လူထုအရေးပေါ်အခြေအနေကာလအတွင်းမည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုပိုလန်ယဉ်ကျေးမှုသည်ခိုင်မြဲနေခဲ့သည်။ တကယ်တော့အိမ်မှဝေးရာသို့ရောက်လျှင်ဝေးရာသို့ပင်လျှင်၊ Kazimierz Pulaski နှင့် Tadeusz Kosciuszko ကဲ့သို့သောအသိအမှတ်ပြုခံယူထားသည့်အမျိုးသားရေးဝါဒီများမှတင်ပြသောသန့်ရှင်းသောတိုးတက်သောစံနှုန်းများသည်အမေရိကန်တော်လှန်ရေး၏ပညာရေးကိုပြသသည်။ ပိုလန်၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည်ဥရောပတွင်အများဆုံးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၇၆၉ တွင်အမေရိကန်နှင့်ပြင်သစ်တို့၏ယုံကြည်မှုများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ပို့စ်များကိုနောက်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ အာဂျင်တီးနားနှင့်inစတြေးလျတို့တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားသောနံပါတ်များကိုရရှိခဲ့ပြီးသူတို့၏ဘဝလမ်းစဉ်ကိုပြသခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဥပမာ၊ Romantic အချိန်ကာလ၏ပိုလန်လက်မှုပညာရှင်များ၊ စန္ဒရားကစားသမားဖရက်ဒရစ်ချန်ပင်းနှင့်စာရေးဆရာအာဒံမစ်ကစ်ဗစ်တို့တို့သည် ၁၉ ရာစုတွင်ဥရောပမြေပေါ်မီးထွန်းပေးခဲ့သည်။ ပိုလန်ပညာရှင်များ၊ အနုပညာရှင်များ၊ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများသည်သူတို့၏စံနမူနာကို လိုက်၍ ကမ္ဘာ့လက်မှုပညာနှင့်အက္ခရာများကိုဆက်လက်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နေကြသည်။
ပြင်ပနိုင်ငံတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါပတ်ဝန်းကျင်၏ဘဝပုံစံကိုရှာဖွေခြင်းသည်သင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်သင်၏ကန ဦး လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ပိုလန်ကိုပြောင်းရွှေ့နေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့လူ ဦး ရေ၊ နေထိုင်မှုပုံစံနဲ။ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများ၊ မတူနိုင်သည့်ချက်ပြုတ်မှုနှင့်အခြားအရာများကြောင့်အိမ်နီးချင်းများ၏ခံစားချက်နှင့်နေထိုင်သူများ၏ရင်းနှီးမှုနှင့်ရင်းနှီးမှုတို့ကြောင့်သင်၏ရာသီဥတုအသစ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ရန်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပိုလန်နိုင်ငံ (၆၀% ခန့်) တွင်နေထိုင်ခြင်းသည်တိုင်းပြည်၏မြို့ပြဒေသများတွင်သက်သောင့်သက်သာရှိစေသည်။ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ပိုကြီးမားသောမြို့များစွာရှိပြီးပိုလန်တွင်လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသောမြို့ကြီးပြကြီးများအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။ နိုင်ငံ၏မြို့တော်ဝါဆောတွင်တစ် ဦး တည်းနေထိုင်သူ ၁.၇ သန်းရှိသည်။ နေရာချထားသူအများစုမှာပိုလန်လူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ဂျာမန်၊ ယူကရိန်း၊ စလိုဗက်ခ်၊ လစ်သူယေးနီးယားနှင့်ဘီလာရုစ်လူမျိုးတို့၏လူနည်းစုသာအနည်းငယ်သာရှိသည်။
နိုင်ငံ၏စည်းဝေးကြီးများနှင့်အနီးအနားရှိဓလေ့ထုံးစံများသည်လက်တင်နှင့်ဘိုင်ဇင်တိုင်း၏သက်ရောက်မှုများမှပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်ကွဲပြားသောဥရောပကျူးကျော်သူများကအထူးဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ အထက်တွင်ကိုးကားထားသည့်အတိုင်းပိုလန်ပြည်သူလူထု၏နွေးထွေးမှုသည်ပိုလန်နိုင်ငံရှိဘဝကိုထိခိုက်သည်။ ဘဝလမ်းစဉ်သည်အနည်းငယ်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ဘာသာစကားဖြင့်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းရှိမရှိမည်သို့ပင်ဆိုစေသင်ချက်ချင်းထည့်သွင်းပြီးပိုလန်နိုင်ငံတွင်အပေါင်းအဖော်အသစ်များကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။
အကောက်ခွန်ဌာနများသည်အထူးသဖြင့်အပြင်လူနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုနှင့်အနီးအနားရှိချက်ပြုတ်ခြင်းများကိုလည်ပတ်စေသည်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့လည်းပိုလန်လူမျိုးတွေဟာရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်မှုရှိပြီးဆွေးနွေးမှုမှာပါ ၀ င်ဖို့အခိုက်အတန့်မတတ်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။
ပိုလန်တွင်လူသိများသောစည်းဝေးကြီးများကိုအခြားသောဥရောပနိုင်ငံများသို့အထူးသဖြင့်ခရစ်စမတ်နှင့်အီစတာကဲ့သို့သောကက်သလစ်အခမ်းအနားများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူလွတ်လပ်ရေးနေ့၊ အန်ဒရေဇာကီ (စိန့်အင်ဒရူး၏နေ့) နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့လုံးဝအနီးအနားရှိအဖြစ်အပျက်များရှိသည်။
ပိုလန်နိုင်ငံကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်ဥရောပသမဂ္ဂသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်မရေမတွက်နိုင်သောပိုလန်နိုင်ငံများသည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောအနောက်ပိုင်းပြည်နယ်များရှိအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်တွင်ပိုလန်ကိုအခြေခံအားဖြင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ယခုနှစ်ဇန်န ၀ ါရီလတွင်ပိုလန်နိုင်ငံသည်ဥရောပသမဂ္ဂတစ်ခုလုံး၏ဒုတိယနေရာတွင်ရှိနေပြီး ၂.၉% အထိရောက်ရှိခဲ့သည်။ ပိုလန်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စပိန်နှင့်အီတလီနိုင်ငံများမှအလုပ်ရှာဖွေနေသည့်နိုင်ငံများတွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောအလုပ်လက်မဲ့ပြtoနာကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားထားသည်။
ထို့ကြောင့်ပိုလန်သည်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလှုပ်ရှားမှု၏နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ပွဲ ဦး ထွက်အသစ်များ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာအရှေ့ဘက်မှလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယူကရိန်းနှင့်ဘီလာရုစ်နိုင်ငံသားလေးပုံတစ်ပုံ၏လေးပုံတစ်ပုံသည်ယခုအချိန်တွင်ပိုလန်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ရေရှည်နေထိုင်သူများအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ပိုလန်အမျိုးသားဘဏ်၏ခန့်မှန်းချက်အရယူကရိန်းလူ ဦး ရေ ၉၀၀,၀၀၀ ကျော်သည်ပိုလန်တွင်တစ်ချိန်ကပုံမှန်ဖြစ်နေသည်ဟုပိုလန်အမျိုးသားဘဏ်၏အကဲဖြတ်မှုအရစစ်မှန်သောကိန်းဂဏန်းသည်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။
သို့သော်ထိုနည်းတူစွာပင်အနောက်ဘက်မှရွေ့လျားမှုတွင်တက်ကြွသောဝေဖန်မှုများရှိသော်လည်းမှတ်ချက်ပေးမှုနည်းပါးသည်။ အခြားအီးယူနိုင်ငံများမှနေထိုင်သူ ၆၇၀၀၀ ခန့်သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တိုင်းက ၂၄,၀၀၀ ခန့်မှပိုလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူများအဖြစ်စာရင်းသွင်းခံရသည်။
ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အခြေခံအသေးစိတ်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အမျိုးသား: D ဗီဇာ / C စီးပွားရေးဗီဇာ
ပိုလန်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency များအတွက်အချိန် processing
မပြတ်မတည့်နေထိုင်မှု၏5နှစ်ပြီးနောက်
သဘာဝမှတဆင့်အသက်ရှင် 10 နှစ်ပြီးနောက်။
ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ
ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်အားဖြင့်ဖြစ်သည် နှင့် နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ရှေ့နေများ ပိုလန်အတွက် ပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အလမ်းများအားနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံတွင်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူရန်ပိုလန်ရှိဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်ပိုလန်နိုင်ငံမှ Golden Visa သို့မဟုတ်နေထိုင်ခွင့်အတွက်ကန့်သတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပါပိုလန်နိုင်ငံမှအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ အကယ်၍ သင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်လိုပါကအပြည့်အဝဖြေရှင်းနိုင်သည် ပိုလန်သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့်ငွေရေးကြေးရေးစီမံကိန်းနှင့်အခြားများစွာပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ရာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်နိုင်မှတဆင့်ပိုလန်အဘို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီ ပိုလန်အတွက်ပိုလန်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ၊ ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်၊ ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများတတ်နိုင်သောနေထိုင်ခွင့်နှင့်ပိုလန်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအကြံပေးကုမ္ပဏီ
ပိုလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်။
နိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ပိုလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာ။
ပိုလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ပိုလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်။
ပိုလန်နိုင်ငံမှ ၁၀၆ နိုင်ငံသို့စီးပွားရေးအခြေပြုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး။
ပိုလန်နိုင်ငံတွင် ၃၇ နိုင်ငံသို့ရွှေဗီဇာအစီအစဉ်များ။
ပိုလန်နိုင်ငံမှ ၃၇ နိုင်ငံအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု။
ပိုလန်နိုင်ငံမှနိုင်ငံပေါင်း ၃၇ နိုင်ငံသို့ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အစီအစဉ်များ။
ပိုလန်နိုင်ငံမှ ၁၀၆ နိုင်ငံအထိစီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအစီအစဉ်များ။
ပိုလန်နိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုဖောက်သည်သည်ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမှပြန်လည်အမြတ်အစွန်းရရှိသင့်သည်ဟူသောရှုထောင့်နှင့်အညီထောက်ခံမှုပေးသည်။ သူတို့ကပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်သူတို့၏ Residency အတွက်ပြုလုပ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှထွက်ခွာလိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပိုလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးအိမ်ခြံမြေဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်နှင့်ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီးပိုလန်နိုင်ငံရှိကောင်းသောနေရာများတွင်အကောင်းဆုံးအမြတ်အစွန်းများရရှိထားသည်။
သိရန်လိုအပ် - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်ပိုလန် Residency
ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေ၏နေထိုင်မှုသည်ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏အောင်မြင်သော Residency အတွက်အသေးစိတ်စာရွက်စာတမ်းအထောက်အပံ့များကိုပေးလိမ့်မည်။ ပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဝန်ဆောင်မှုများတွင် -
ကျွန်ုပ်တို့သည် Residence ကိုပိုလန်နိုင်ငံရှိ Residence Permit ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ကိုအကြံပြုခြင်းမပြုမီအစီရင်ခံစာပြင်ဆင်ရန်နှင့်ငြင်းဆန်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် First Diligence ကိုပြုလုပ်သည်။
ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်လုံလောက်သောလုံ့လဝီရိယရှိရှိလေ့လာခြင်းအစီရင်ခံစာအပေါ် အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအောင်မြင်မှုအတွက်အခြားအစီအစဉ်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်သင်၏ Residency နှင့်အတူရှေ့သို့လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်အတွက် client နှင့်မိသားစု ၀ င်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များကို scan ဖတ်မိလိမ့်မည်။
ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်လွှာအားဖြင့် Residency စာရွက်စာတမ်းများဘာသာပြန်ခြင်းနှင့်အက်ပလီကေးရှင်း။ ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ရွှေဗီဇာဖြင့် Residency အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးရှေ့နေများသည်ဖြည့်စွက်ပုံစံများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုကူညီလိမ့်မည်။
သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနေထိုင်မှုပုံစံအတွက်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့် Residency အတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးပါက၎င်းကိုသက်ဆိုင်ရာပိုလန်အာဏာပိုင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ပါလိမ့်မည်။
ပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သတင်းကောင်းကိုသင်နှင့်အခြားအထောက်အပံ့များအတွက်စတင်ပြင်ဆင်နေသည်။
ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများမှအောက်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်များ (သို့) ပိုလန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား Residency ကိုကျွန်ုပ်တို့မပံ့ပိုးပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ကုန်သည်များသို့မဟုတ်ပိုလန်နိုင်ငံမှလက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်ဖြန့်ဖြူးသူများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ပိုလန်နိုင်ငံတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်များကိုစက်မှုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံသည် ပိုလန်နိုင်ငံရှိတရားမဝင်သောသို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကမ်းလှမ်းခြင်းမရှိပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအထောက်အပံ့ဖြင့် ပိုလန်အတွက် ပိုလန်ရှိမျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုကိုင်တွယ်သူတစ် ဦး ချင်းအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပိုလန်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒသို့မဟုတ်နျူကလီးယားလက်နက်များရောင်းဝယ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်အားဖြင့် ပိုလန်အတွက်အထောက်အပံ့ကိုပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်မရနိုင်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် ပိုလန်အတွက် တရားမဝင်မွေးစားအေဂျင်စီများအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
နေထိုင်ခွင့် ပရိုဂရမ်ဝန်ဆောင်မှု ပိုလန်အတွက် ပိုလန်ရှိဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများအတွက်မဟုတ်ပါ။
နေထိုင်ခွင့် အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုန်ဆောင်မှုများက ပိုလန် ပိုလန်ရှိညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုသူများအားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်အတွက်ရှေ့ရပျ ပိုလန်နိုင်ငံရှိမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမထောက်ပံ့ပါနှင့်။
“ အရေးကြီးတဲ့သတိပေးချက် : MM Solutions INC သည်ပိုလန်နှင့် KYC အတွက်ဖောက်သည်များအတွက် AML စာရွက်စာတမ်းများကိုတိကျမှန်ကန်စေရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော်လည်း၊ လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုရန်အတွက်ပိုလန်ရှိအာဏာပိုင်များကငြင်းပယ်မှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့တွင်တာဝန်ရှိသည်။ နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုလန်၏ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွေ့အကြုံများဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Residency ၏ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းမှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ပိုလန်အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်နိုင်သောနှုန်းဖြင့်စျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းကိုကမ်းလှမ်းသည်။
ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့၏မိသားစုများကိုပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက် dual Residency အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရယူခဲ့သည်။
ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်သင်၏ Residency မတိုင်မီနှင့်ခွင့်ပြုချက်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းအဖွဲ့ ၀ င်သည်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပံ့ပိုးမှုအတွက်ထိုတွင်ရှိလိမ့်မည်
Residency တွင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိပြီးပိုလန်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုများပေးနေသည်။
အမှု၌, သင်ပိုလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်သင်၏ Residency ပျက်ကွက်, ငါတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသောနောက်ထပ် 36 နိုင်ငံရှိပါတယ်, ငါတို့အစီအစဉ်ခနှင့်အတူအဆင်သင့်။
Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့်တွက်လျှင်မိသားစု ၀ င်များနှင့်အသက်အရွယ်စသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပါ။ ပိုလန်အတွက်ဖောက်သည်အမြောက်အများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်နှင့်အခြားအခကြေးငွေများဖြင့် Residency အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်။
ပုံစံ ဗီဇာ ပိုလန်အတွက်
ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အနာဂတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုသာစာရင်းပြုစုထားသည်။
သင်သည်သင်၏မိသားစုနှင့်အတူပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်စီစဉ်နေပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုလန်အတွက်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အနေနှင့်၊ သင်ပိုလန်၌တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့်သင်လိုအပ်နိုင်သည့်အချိန်နှင့်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများစွာပေးအပ်ရန်ရှိပါသည်။
ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခြင်းဖြင့် Residency မှလွဲ၍ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေး၊ အိုင်တီနှင့် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။ ပိုလန်နှင့်အခြား ၁၀၆ နိုင်ငံတို့အတွက်တစ်နေရာတည်းဖြစ်သည့်ပိုလန်အတွက်အခြားအတိုင်ပင်ခံများကပေးသောထီးတစ်ခုအောက်တွင်သင်မတွေ့ပါ။
မိသားစုများ၊ တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသူတို့၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်ရည်မှန်းချက်များပြည့်မီအောင်ကူညီရန်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများ၊ အတိုင်ပင်ခံများနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံနှင့်နိုင်ငံတကာမှအကူအညီများဖြင့်ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကို ကျော်လွန်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်၏လမ်းကိုထောက်ပံ့သည်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ သို့မဟုတ် Offshore နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံ (ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပို၍ ဈေးချိုသည်။ )
ပိုလန်သို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမည့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမဆိုလိုအပ်လိမ့်မည် ပိုလန်ရှိကိုယ်ပိုင်ဘဏ်အကောင့် ပိုလန်နိုင်ငံရှိကုမ္ပဏီဘဏ်စာရင်းနှင့်လည်းကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
Incase သင်အဘို့, ပိုလန်အတွက်တိုင်ပင်လိုအပ်ပါတယ် ပိုလန်အတွက်ဒီဂျစ်တယ်ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ပိုလန်မှရိုးရာသို့မဟုတ် fintech ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်သို့မဟုတ် crypto ဖြေရှင်းမှုများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသိပေးပါ။
မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက် သင်ရန်စီစဉ်ထားလျှင်ပိုလန် ပိုလန်တွင်ရှိသည့်စီးပွားရေးကို ၀ ယ်ခြင်းဖြင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ ပိုလန်အတွက်လက်ငင်းစတင်သည်။
ပိုလန်ရှိ HR ဝန်ဆောင်မှုများ
ကျွန်တော်တို့၏ ပိုလန်အတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ကုမ္ပဏီ အမြန်စုဆောင်းမှုနှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သည်။ သင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် ပိုလန်အတွက်နေရာလွတ် post အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပိုလန်အတွက် virtual ဖုန်းနံပါတ်များ
ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးတယ်လီဖုန်းစနစ်များ ပိုလန်များအတွက်ကို virtual နံပါတ်များ 102 နိုင်ငံများနှင့် 291 မြို့ကြီးများ။
စာရင်းကိုင်, ပိုလန်အတွက်ကြောင့်လုံ့လဝီရိယနှင့် အများကြီးပို.
ပိုလန်ရှိ Virtual Office Address
ပိုလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency ပြီးနောက်, အတွက် setup ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပိုလန်.
အောက်ဖော်ပြပါ IT ဖြေရှင်းနည်းများကိုပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်
ပိုလန်၌ Web ဒီဇိုင်း
ပိုလန်နိုင်ငံတွင် Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပိုလန်နိုင်ငံရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပိုလန်နိုင်ငံတွင် App Development
ပိုလန်အတွက် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်ရှေ့နေများ
ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြေများအားဖြင့်တရား ၀ င်နေထိုင်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အောင်မြင်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပိုလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ ပိုလန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီသည်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များရှိသည်။ ပိုလန်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်ရှင်းလင်းသောမဟာဗျူဟာမြောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းချက်။ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့မှကျွန်ုပ်တို့၏ Residency သည်ဖောက်သည်၏အောင်မြင်မှုအတွက်ထုံးစံအတိုင်းဖြေရှင်းမှုများကိုပေးသည်။
သင်၏မိသားစုဝင်များ (ကလေးများ၊ ဇနီး၊ မိဘများ) သည်ပိုလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီးပိုလန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ခွင့်ကိုအတည်ပြုပြီးသည်။
ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများက Residency မှသင်၏ကိုယ်စားဥပဒေရေးရာဆောင်ရွက်မှုများအားလုံးအတွက်ပိုလန်အတွက်ရှေ့နေလိုအပ်သည်။ သင်ပိုလန်သို့ရောက်လျှင်သို့မဟုတ်ပိုလန်သို့သွားရန်စီစဉ်ထားပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်၏ရှေ့နေအားဤတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။
ရှေ့နေပါဝါရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့အပိုမယူပါ။ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုသင်အဝေးမှစတင်ရန်စီစဉ်ပါကပိုလန်နိုင်ငံ၏နယ်မြေတွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ရှေ့နေအားတရားဝင်ဖြစ်သင့်သည်။ သင်၏နေထိုင်သည့်နိုင်ငံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်ပိုလတ်စ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးမှအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်တရားဝင်ဖြစ်စေသင့်သည်။
အမေးများသောမေးခွန်းများ - ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း
ပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ ပိုလန်၏စီးပွားရေးကိုစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ပိုလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပိုလန်၏နေထိုင်မှုကိုပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်၊ ပိုလန်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနေထိုင်ခွင့်နှင့်အကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကနေထိုင်ခွင့်၊ ပိုလန်၌တည်၏။
ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့် ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုယ်စားလှယ်များနေထိုင်ခွင့် ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကနေထိုင်ခွင့် ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများမှနေထိုင်ခွင့် ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိုင်ပင်ခံများကနေထိုင်
ပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပိုလန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်တို့ဖြင့်ပိုလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစီအစဉ်ဖြင့်နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှေ့နေများကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရှေ့နေများကနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများမှနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုလျှောက်ထားပါ။ ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအေးဂျင့်များကအကောင်းဆုံးနိုင်ငံသားအဖြစ်နှင့်ပိုလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများ။
စျေးသက်သာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်လူကြိုက်များသောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်စျေးချိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများ ပိုလန်အတွက်တတ်နိုင်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး ပိုလန်အတွက်တတ်နိုင်သောလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကုမ္ပဏီများ
ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည်။ ပိုလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့်အိမ်ခြံမြေ၊ စီးပွားရေး၊ အစိုးရငွေချေးစာချုပ်များစသည်ဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံ၏တရားဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုပိုလန်နိုင်ငံတွင်လျှောက်ထားပါ။ ပိုလန်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ပိုလန်နိုင်ငံတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ၊ ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့ရှေ့နေများနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးဒုတိယပတ်စ်ပို့အကြံပေးများ၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်။
ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဝန်ဆောင်မှု ပိုလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုယ်စားလှယ်များ ပိုလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပိုလန်နိုင်ငံရှိနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှေ့နေများ ပိုလန်အတွက်ဒုတိယနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတိုင်ပင်ခံ
ပိုလန်နိုင်ငံရှိရွှေဗီဇာကိုအစိုးရ၏ငွေချေးစာချုပ်၊ စီးပွားရေး၊ အိမ်ခြံမြေစသည်တို့ဖြင့်ပိုလန်၏စီးပွားရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံ၏နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်သည် ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများ၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာရှေ့နေများနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံများ၊ ပိုလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံရှိအကောင်းဆုံးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီများမှတစ်ဆင့်ပိုလန်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ
ပိုလန်အတွက်ရွှေဗီဇာဝန်ဆောင်မှုများ | ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာကိုယ်စားလှယ်များ ပိုလန်ရှိရွှေဗီဇာရှေ့နေများ ပိုလန်နိုင်ငံရှိ Golden visa ရှေ့နေများ ပိုလန်အတွက်ရွှေဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ
ပိုလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဘာလဲ။
ပိုလန်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာယူရို ၁၀၀,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်ပိုလန်နိုင်ငံအတွက် Residency အတွက်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့ပေးပါသလား။
ဟုတ်ပါတယ်, ပိုလန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေနှင့်ပိုလန်ရှိအေးဂျင့်များသည်ပိုလန်နိုင်ငံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency ကိုထောက်ခံသည်။
ပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခွင့်၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်များကြောင့် Residency သည်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ပိုလန်နိုင်ငံသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency အတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခကိုသာပေးဆောင်သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေရှင်းမှုဖြင့် Residency အတွက်အခြားအထောက်အပံ့များများစွာပေးသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်နေထိုင်ခွင့်ကိုမည်သည့်နိုင်ငံသားမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအနည်းငယ်မှအာရှမှပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အာဖရိကမှပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ဥရောပမှပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ တောင်အမေရိကမှပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ မလေးရှားမှပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှပိုလန်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အင်ဒိုနီးရှားမှပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ သီရိလင်္ကာမှပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ နီပေါမှပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့်နေထိုင်ခြင်း၊ အိန္ဒိယမှပိုလန်နိုင်ငံမှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် Residency နှင့် Residency ယူအေအီးမှပိုလန်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းညွှန်မှုအားဖြင့် Professional ကနေထိုင်မှု ပိုလန်အတွက်
ပိုလန်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားဖြင့် Residency အတွက်အရေးကြီးသောဝေါဟာရများ
သိပ္ပံနှင့်အဆင့်မြင့်ပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန
အားကစားနှင့်ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀ န်ကြီးဌာန
စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာန
အမျိုးသားပညာရေး ၀ န်ကြီးဌာန
ပြည်ထဲရေးနှင့်အုပ်ချုပ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန
အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀ န်ကြီးဌာန
link ကိုမှ ပိုလန်၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဦး စီးဌာန ပိုလန်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်မူဝါဒချမှတ်ရန်တာဝန်ရှိသည်